अयोध्या दरवारबाट वाल्मीकि आश्रममा किन छाडिइन् सीता ? - National News
तर, कथा त्यही सरल ढंगले अघि बढेन । राजा दशरथले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा जेठा छोरा रामलाई आफ्नो राज्य सुम्पने तयारी गरे । त्यसको लागि उनले एउटा एउटा ठूलो समारोहको आयोजना गरे । सो समयमा राजा जनकका पुत्रहरु भरत र शत्रुघ्न मामाघरमा गएका थिए भने राम र लक्ष्मणसँगै घरमा थिए ।
श्रीरामको भोलिपल्ट राज्याभिषेक हुँदै थियो । यता कान्छी रानी कैकेयीकी दासी मन्थराले आफ्नी रानी कान फुकेर जसरी पनि भरतलाई राज्याभिषेक गराउने व्यवस्था मिलाउन उक्साईन् । कैकेयीले पनि पहिले त यो सुझाव ठाडै अस्वीकार गरेकी थिइन् । रातभरी मन्थराले अनेक पाठ पढाएपछि उनी पनि श्रीराम विरुद्ध लाग्न सहमत भइन् । उनले आफूलाई पहिले नै राजा जनकले दिएको वचन सम्झाएर भरतलाई राज्य दिलाउने योजना बनाइन् ।
एकपटक स्वर्गसँगको युद्धको बेलामा गम्भीर घाइते भएका जनकलाई कैकेयीले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर बचाएकी थिइन् । मृत्युशैयाबाट फर्किएका राजा दशरथले सोही समयमा कैकेयीलाई दुई वर माग्नको लागि आग्रह गरेका थिए । त्यसको जवाफमा कैकेयीले आफू अहिले पूर्ण भएकोले कुनै वर नमाग्ने भन्दै समय आएपछि वर माग्ने बताएकी थिइन् । सोही कबुललाई टेकेर राज्याभिषेकको दिन बिहान कैकेयीले राजासामु आफ्नो पुत्र भरतलाई राज्याभिषेक र श्रीरामलाई १४ वर्ष वनबास गराउन माग गरिन् ।
यस्तो छ ओपो रेनोटू एफ र डल्बीको संयोजन
सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनकै कारण वर्षेनी २७ हजार नेपालीले गुमाउँछन ज्यान
विवाह गर्दै हुनुहुन्छ ? मेडिकल टेस्ट गर्नु आवश्यक छ